Archive du 20170826
Governemanta Minisitra 3 nalana
Niova omaly hariva ny ampahany tamin’ny mpikamban’ny governemanta. Minisitra miisa 3 no nalana tanteraka tamin’ny asany, dia ny minisitry ny raharaham-bahiny Atallah Béatrice nosoloina an’i Henry Rabary-Njaka.
Narson Rafidimanana Nahiliky ny HVM
Nisy eo ireo efa nahafantatra mialoha, tao ireo tsy nino..saingy iny niaraha nahita iny ny fanovana mpikambana teo anivon’ny governemanta.
Tolojanahary Maharavo « Tsy mbola resy ny DFP ! »
Tsy mety mazava amin’ireo mpanara-baovao hatramin’izao ny tena tanjon’ilay vovonana Herin’ny fanovana nanao fihetsiketsehana matetika tato ho ato.
Fiarahamonim-pirenena Maniry ny hampian’ny fitondrana
Nosokafana tetsy amin’ny esplanade Analakely ny alakamisy 24 aogositra ny andro iraisam-pirenena ho an’ny fiarahamonim-pirenena.
Kaominina Ivato Voatendry ny sefom-pokontany vaovao ao Mandrosoa
Voatendry ny sefom-pokontany vaovao ao Mandrosoa, kaominina Ivato.
Raharaha Claudine Razaimamonjy Mbola misy olona karohina
Anjaran’ny fitsarana ny fanadihadiana ireo dosie efa eny am-pelatanany, ary mitohy kosa ny fanadihadian’ny Bianco momba ireo dosie tsy tafita any amin’ny fitsarana amin’izao fotoana raha ny fanazavan’ny Jeneraly Ratovoson Benjamina, filohan’ny sampan’ny Bianco Antananarivo.
Zahid Razah Efa tafiditra tamina raharaha “Kidnapping”
Mbola mitana ny sain’ny maro ny nahafatesan’i Zahid Hossanaly Razah, kaonsilin’i Malaisie nisy nitifitra teny Tsaralalàna ny takarivan’ny alakamisy tokony ho tamin’ny 6 ora.
Vondron-tsendika SARTM Hampiharo ny didim-pitsarana sy ny lalàn’ny asa !
Nomarihina ny tontolo andron’ny alakamisy 24 aogositra lasa teo teny amin’ny Club Nautique Ivato ny faha-25 taonan’ny SARTM (Syndicat Autonomne pour le Rassemblement de Travailleurs Malgaches) na Sendika mizaka tena ho an’ny fampivondronana ny mpiasa Malagasy.
Taorian’ireo fitetezam-paritra efa vitan’izy ireo dia anjaran’Antananarivo indray izao no akan’ilay fikambanana Vahaolana Anio sy Rahampitso
Mpianatra Rugby etsy Antanimena Novatsian’ny STAR fitaovam-pianarana
Ankizy miisa 40 amin’ireo 100, folo hatramin’ny 15 taona noraisin’ny sekolin’ny Rugby hianatra ity taranja ara-panatanjahantena iray ity etsy amin’ny Stade de Cheminot Antanimena no novatsian’ny vondrona Star fitaovam-pianarana feno omaly, nahitana kitapo, trousse, kahie,
Baolina kitra « Tournoi de vacances 3FA 2017 » Nanao pao-droa ny Bayern Andrefan’i Mananjara
Tontosa teny amin’ny kianjan’Alarobia Antananarivo, ny alakamisy 24 aogositra teo ireo lalao famaranana ny baolina kitra “tournoi de vacances 2017” ho an'ny sokajy 10 , 13 , 15 , 17 taona ary ny vehivavy nokarakarain'ny club 3FA Avaradrano tarihin-dRakotonirina Harison Philibert.
Nanao pao-droa, ny alakamisy 24 aogositra teo, ny ekipan’ny Bayern Andrefan’i Mananjara teo
amin’ireo lalao famaranana ny baolina kitra “tournoi de vacances 2017” nokarakarain'ny club 3FA Avaradrano
Rallye Tmf – Dingana voalohany Nahavita fotoana tsara indrindra i Gérard sy Teddy
I Gérard Louvel sy Teddy n°2 mitondra ny fiara Mitsubishi Lancer Evo IX N4 no ekipazy nahavita ny fotoana tsara, indrindra tamin’ny dingana manokana na ny ES 1 nirefy 8,78 km amin’ny rallye Tmf 2017 nampitohy an’Ambodimanga-Bemasoandro teny Ambohidratrimo,
Rugby à XV Hitohy ireo lalao eto Analamanga
Hitohy hatrany ireo lalao rugby à XV tontosaina eto Analamanga ankehitriny ka ho an-dry zareo eo anivon’ny « Commission Technique Fédérale »
Miharatsy ny tantara
Ny teo aloha tsy mety hangarahara, ny aty aoriana mampitombo ny endrika efa ratsy ananan’ny firenena.
Foara Boeny mihonjo Fahombiazana tanteraka
Hifarana amim-pomba ofisialy anio sabotsy 26 aogositra ao Mahajanga rehefa naharitra hateloana ilay hetsika foara ara-toekarena Boeny Mihonjo andiany fahefatra, tohanan’ny Banky BNI Madagascar.
« Salon des études sup » Ny 7 sy ny 8 septambra ho avy izao
Mbola betsaka amin’ireo tanora mpianatra eto amintsika no manana olana amin’ny fisafidianana izay lalam-piofanana arahiny aorian’ny fahazoany ny Bakalôrea.
Fahantrana, asan-jiolahy, faty olona,… “Izahay aloha izao no eto, mahandrasa 2018”
Tsy milamina ny tany sy ny fanjakana, saingy tsy mahataitra sy maharototra ny fanjakana HVM intsony.
Araka ny lalam-panorenana dia mitovy daholo isika manoloana ny lalàna na mpitondra na entina.